Cheshire Cat kuyinto slot kokuba 5 reel kunye 40 paylines. I inoveli ethandwayo Alice in Wonderland umxholo slot. Kwisicwangciso kumngxunyana lihlathi kwaye soundtrack yeyona ethoba. Le mifanekiso nje iimpawu bonus emihle abaninzi ekhona kulo adventure emangalisayo bomlingo ukwenza umdlalo ezinomdla kakhulu. Lo mdlalo nayo idlalwe Slots phone wekhasino.
Paylines Simple Five kule elula Slots phone wekhasino
Slot enoluhlu ukubheja ekukho kuzo 40p ukuya ku £ 400 spin nganye. Kusetyenziswa ezi simboli evela kwi reel zibandakanya Alice, i March Hare, i Caterpillar kunye Cheshire Cat kwakhona kunye namakhadi ukudlala- J, K, A no Q, izilayi cake, kunye potions imilingo.
Le slot unika 12.5 amaxesha isibonda xa ufike 5 neesimboli payline eyodwa. I-Super eDibanisa osemqoka uphawu ukusuka apho abadlali ndingekawuboni bangazuza lukhulu. Kulo msebenzi, wangaphantsi ngesimboli enye iya avele akhethwa ukuze ijike ibe uphawu super elibhalwe kuzo zonke Ihlole.
Kukho izinto bonus ogama Free osebenzisa Bonus Feature leyo iye izakufunyanwa xa iisimboli bonus ivili ubuncinane ezintathu umhlaba kwi reel. 3 kubo Sinika nina ijikelezisa five ezamahala, 4 kubo Sinika nina ijikelezisa ezilishumi simahla kwaye kananjalo izihlandlo ezilishumi isibonda iyonke. Ukuba uvula kuba nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba 5 yabo, uya kunikwa amabini ijikelezisa simahla kunye nebhaso lemali lika 50 amaxesha ubhejo iyonke.
Ngaphambi phawu abakhwetha, kukho icandelo Ivili leyo udlalwa phambi ekuqaleni ijikelezisa yamahala amabhaso endle phezu ekwazi akhethwe zazivelela. Unako kwakhona nokufumana 4 ekwazi zasendle ukuba ingaba mihle ukuba uhlawula kakhulu.
Kukho izinto Bonus Guarantee eqinisekisa ukuba ukubaluleka win ubuncinane 10 amaxesha isibonda. Ukuba win ngaphantsi, win uya kufumana songeza. Undoqo ekuzuzeni omkhulu ukugcina iliso kwi ekwazi asendle Free esijikelezayo Bonus Feature.
Nge mahluko eyahlukahlukeneyo ukusuka kwengabalulekanga kangako ukuya kweziphakathi, umdlalo slot nga idlalwe kuzo zonke izixhobo ukusuka mobile, tablet kanye desktop nezixhobo. kakuhle, le Slots phone wekhasino Kwakhona lo mdlalo. Uyilo cartoon pretty elula kusebenza kakuhle ukuba abadlali ngexesha track elungileyo okhestra kudlala ngasemva. Betha i reel iphazamisane namhlanje ngokwalo ku Slots phone wekhasino okanye ezinye izixhobo ezikhoyo kunye Cheshire Cat amzisele ezi- ochwayithileyo kuwe.